Ahoana ny fomba hahitana ny tompon'ny iPhone very na halatra | Vaovao IPhone
Carmen rodriguez | | Vaovao IPhone, IPhone Security
Mahagaga fa tsy ny iPhones ihany no angalarina fa very ihany koa. Inona no hatao rehefa sendra azy ianao? ny valiny miharihary dia andramo avereno amin'ny tompony marina izany, saingy matetika isika dia matahotra ny hanao fombafomba izay miafara amin'ny tanan'ny olona tsy dia misy scruples noho isika.
Mety ho sarotra ny mahita ny tompony marina raha toa ka napetraka ny kaody hidy, fa raha miasa ny iPhone hitanao azonao atao ny mampihatra ny tetika sasany arosoko hanampy anao hifandray amin'ny tompony ao a Fotoana firaketana.
1 Raha tsy misy kaody hidy, jereo ireo antso nataonao farany
2 Raha misy kaody passcode dia mangataha fanampiana amin'i Siri
3 Tazomy hatrany ilay fitaovana ary valio ireo antso an-tariby
4 Tadiavo ny IMEI ary mifandraisa amin'ny ISP anao
5 Ny serivisy
6 Momba iPhones very na nangalarina
Raha tsy misy kaody hidy, jereo ireo antso nataonao farany
Tsy misy olona te hanafika tsiambaratelo an'ny olon-kafa, nefa amin'ny farany afaka manao maningana ianao raha antony tsara io.
Mikaroha eo anelanelan'ny antso, ny farany indrindra na ireo izay fantatra ho «Casa»Ary miantso, ho faly kokoa izy ireo handeha any amin'ny faran'izao tontolo izao haka ny iPhone-ny. Eritrereto fa niantso anao izy ireo hilaza aminao, tsy hisy hahatsiaro fa nijery ny lisitr'ireo antso ianao.
Raha misy kaody passcode dia mangataha fanampiana amin'i Siri
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatsapa fa na dia miaraka amin'ny hidy kaody iPhone aza, azo foanana hanao zavatra toy ny manao antso na mandefa hafatraRaha tsy hoe mazava ho azy dia nofoanin'izy ireo io fisasa io ao amin'ny Settings.
Ny sasany amin'ireo safidy dia; «Miantso any an-trano" 'Antsoy i Neny"Na"Miantso dada»
Tazomy hatrany ilay fitaovana ary valio ireo antso an-tariby
Raha tsy nisy nety, dia isika ihany tazomy foana ny iPhone ary voampanga miandry anao koa miantso ny tompony, na namana afaka mifandray aminy amin'ny fomba hafa.
Na dia toa hafahafa aza ny mamaly findain'ny olon-kafa, tadidio izany ataonao ho an'io olona io, tsy ho anao na noho ny antony tsy dia mendrika hoderaina loatra.
Tadiavo ny IMEI ary mifandraisa amin'ny ISP anao
Ny iPhone rehetra dia manana isa tsy manam-paharoa antsoina hoe IMEI vita pirinty any ho any. Azonao atao ny mampiasa an'ity fampahalalana ity hanarahana ny tompony. Raha mandeha ny iPhone dia azonao jerena ny anaran'ny orinasa an-telefaona eo amin'ny zoro havia ambony, ity dia mety ho teboka fanombohana hitadiavana ny tompony.
Ity orinasa ity ianao ihany no mila ny IMEI hanome anao fanohanana terminal ary farany manampy amin'ny fitadiavana ny tompony.
El IMEI azonao atao ny mamantatra azy ara-batanaao amin'ny:
iPhone 5s, iPhone 5c ary iPhone 5: Natonta tamin'ny fonony aoriana, faritra ambany.
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS ary iPhone 3G: esory ny fitoeram-bokatra SIM dia ho hitanao pirinty ny IMEI sy ny laharana serial.
IPhone voalohany: Voatonta amin'ny fonony aoriana, faritra ambany.
Ny IMEI natonta amin'ny iPhones rehetra dia 15 tarehimarika. Raha manana ISP ny tompon'ilay iPhone resahina CDMA, toa an'i Verizon na Sprint, ny tarehimarika 14 voalohany ihany no takiana amin'io isa io, ka mamela ny tarehimarika farany fotsiny.
Raha hitanao fa misy ianao manahirana anao tadidio loatra fa isika manana serivisy sasantsasany izahay afaka manampy anao izany, toy ny;
Jereo ny orinasan'ny iPhone ary afaka mifandray amin'ny orinasa.
Fantaro raha afaka ianao ary tsy maintsy maka taranja hafa ianao.
Fantaro raha misy iPhone mihidy na nangalarina ary manao tatitra amin'ny polisy.
Momba iPhones very na nangalarina
Aza adino fa maro ny tompona no mety mampiasa Karohy ny iPhone-ko hanara-maso ny fitaovana na azon'izy ireo atao ny miantso ny orinasanao hitatitra ny fatiantoka na fangalarana ary miroso amin'ny hidin-IMEI. Raha mitranga izany dia mety tsy mandeha amin'ny telefaona ny telefaona.
Raha hitanao io fa tsy averinao dia mety heverina ho nangalatra. Raha mihetsika Karohy ny iPhone-ko dia mavitrika ary ny tompony manara-maso anao amin'ny fomba mahomby, misy vintana izany miseho eo am-baravaranao miaraka amin'ny mpampihatra lalàna mifampitantana. ATSINANANA tsy tsara fiafarana fikasana tsara. Ataovy ao an-tsaina fa ny fanapahan-kevitra raisinao amin'ny faharoa alainao ny iPhone dia mety hisy fiantraikany be aminao.
Raha nanandrana ireo dingana teo aloha ianao dia ho afaka hanaporofo izany efa nanandrana namerina ny iPhone ve ianao, fa tsy misy afaka manaisotra izany aminao. Tombano tsara izay ataonao amin'ity fitaovana ity alohan'ny handehananao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Ahoana ny fomba hahitana ny tompon'ny iPhone very na nangalarina
Matahotra aho mahita ny findaiko ary indrindra ny fametrahana ny tenanao eo am-baravaran'ny tranonao, raha toa ka misy hadisoana farafaharatsiny 50 metatra, any an-tsaha misy olona 5 raha hitanao izany, fa eny an-dalambe misy vondrom-piarahamonina mpifanila vodirindrina, tsy mananihany.
Very indray mandeha aho ary nahita ny iPhone tsy latsaka 5 metatra ...
Ny 50 metatra dia fanatonana, ny serivisy toerana dia mifototra amin'ny fitambaran'ny GPS, WiFi, tambajotram-bahoaka ary iBecacons. Mazava ho azy fa tsy mitovy ny any amin'ny tanàna very any Pyrenees fa tsy ny afovoan'ny renivohitra toa an'i Madrid na i Barcelona.
Miankina amin'ny fomba mety hahalalanao ny marina sy raha tsy ao anaty sakana fanatobiana mihidy mandritra ny androm-piainana ianao dia afaka mahita ny mpampiasa, mila maniry fotsiny.
Misaotra anao niditra!
Cristian Camilo Guarin Mendoza dia hoy izy:
HITANAO MODELY IPHONE A1387 IZANY dia manana lakilen'ny 4-DIGIT amin'ity. Tsy afaka miteny amin'ny SIRI ve aho hoe iza ity IPHONE ity? AZA MIALA AHO RAHA misy mahalala ny azoko atao mba hifandraisako amin'ilay tompon'antoka azafady mba hamaly an'ity fankasitrahana ity izay mipetraka ao amin'ny BOGOTA COLOMBIA DEN vahaolana ary miezaka aho hamaha azy io mba hijerena ireo zavatra tsy hitako ihany.
Valio amin'i Cristian camilo Guarin mendoza
NY FAHAMARINANA dia IZAY NOSOKAFANAO, Fividianana ratsy izany, ilay zazavavy izay nivarotra ahy ity IPHONE 6 ity dia tsy namaly intsony ahy ary ny IMEI sy ny mahita ny telefaoniko dia voavolavola, ary tiako ho fantatra ny fomba hifandraisan'ny tompona trano. HITENY AZY IZAY Nitranga tamiko ary inona no azonao anampiana ahy na zavatra sasany?
Alohan'ny hividianana iPhone efa niasa dia mila manamarina ianao fa tsy mandeha ny hidin-trano, azonao jerena ao amin'ny icloud.com/activationlock
Javier Diaz dia hoy izy:
Raha fantatrao hoe aiza izy na kely na kely dia miantso azy ianao ary afaka mihaino azy ianao, indrindra raha manana feon-kira hafa ianao amin'ny ambiny.
Valiny tamin'i Javier Diaz
Lope dia hoy izy:
Ahoana raha hoentintsika any amin'ny polisy izy ireo mba hamerenan'izy ireo azy?
Valiny tamin'i Lope
Safidy hafa io, saingy misy zavatra roa izay mazàna manosika ny hamerina izany alohan'ny handehanana any amin'ny polisy:
1. Matahotra izahay fa hitazona izany ny polisy, mariho fa ny lavanty ataon'ny mpitandro ny filaminana dia manarona ny karazana fananana nalaina ankeriny afa-tsy solosaina finday, fakantsary, telefaona, sns. Tonga any amin'ny olom-pirenena ny fisalasalana.
2. Miandrasa valiny amin'ny fiverenana.
Fa toy ny zava-drehetra, misy ny tsiro sy ny safidy ho an'ny rehetra, misaotra anao tamin'ny fandraisanao anjara.
David il signorino dia hoy izy:
Raha tsy manana kaody hidin-trano ny iPhone dia azonao atao ihany koa ny mandeha any amin'ny Settings> iCloud na Settings> Mail, ny fifandraisana, ny kalandrie. raha hijery hoe iza ny adiresy mailaka an'ny tompona terminal ary manorata any amin'iny olona iny mba tsy hiankina amin'ny fitazonana ny iPhone amin'ny bateria mandra-piantsoanao na hiantso anao.
Valiny tamin'i David Il signorino
Tena tsara, tsy nianjera tamin'ity ...
Misaotra an'i David nizara azy!
Azo atao koa ny miantso ny AppleCare hanamafisana raha voahidy ny terminal na tsia ary / na raha mandeha ny hidim-baravarana raha tsy afaka miditra amin'ireo fikirana iCloud isika. Afaka manome anao an'ity fampahalalana ity maimaimpoana izy ireo.
Tsy azoko antoka fa hanome anao fampahalalana momba ny terminal izy ireo raha miantso ianao nefa tsy misy fampahalalana momba ny tompony, satria mila mamantatra ny tenanao ho toy izany ianao, raha tsy manaraka ny LPD Espaniola izy ireo.
Miarahaba anao ary misaotra ny anjara birikinao!
Raha mankany amin'ny Apple Store ianao dia azonao atao ny mangataka azy ireo hilaza aminao hoe iza no anarany ary hanome anao ny data-ny
Raha manao izany izy ireo dia manitsakitsaka ny politikan'ny fiarovana azy ireo, tsy safidy azo atao izany, alao sary an-tsaina hoe ninia nangalatra terminal aho ary nankany amin'ny Apple mba hanome ahy ny angona, milaza fa te-hamerina izany aho, ary omen'ny tompony ahy data…. Misaotra anao ! Afaka manao hosoka tanteraka aho izao ary manana fitarainana i Apple noho ny tsy fanajan'izy ireo ny LPD.
Fa tsara fa mandray anjara isika rehetra mahita ny safidy tsara indrindra, misaotra Jaume!
Sabrina dia hoy izy:
Salama, jereo, nitranga tamiko fa nanova telefaona finday ho an'ny iPhone 5 nandritra ny roa andro aho ary nilaza tamiko ilay zazalahy fa azo vohaina, nomeny ahy tsy nisy puce ary tiako haverina aminy, Allah tompony fa tsy haiko ny manao azy.
Mamaly an'i Sabrina
Pullet dia hoy izy:
Salama, nahalala ny mombamomba ny tompony ve ianao? Toy izany koa no nitranga tamiko & tsy fantatro ny fomba hahitana ny angon-drakitra an'ny tompona
Valiny amin'i Pollita
mpiremby dia hoy izy:
Manana iPhone s4 aho ary tao amin'ny disko no nahazoako azy ary ny ampitso dia efa nanamarina angon-drakitra aho na ny fomba hahafantarana hoe iza izany
Valio ny mpiremby
SALAMO TSARA TSARA, IZAHAY NO MPITONDRA TOERANA GAS, ARY MPIVAROTRA AOKA AHY NY IPHONE 4 SATRIA NISEHO NY karatra NORAINY, nilaza IZY Hiverina ao anaty herinandro iray ary efa 2 volana IZAY ary tsy niverina intsony aho, ary tsy nody 'Mieritreritra aho fa hiverina izy, maninona no nitranga ny 3 herinandro dia nandao ny sambo ny IPHONE RUN avy amin'ny batery ary nihidy, TSY MISY tatitra momba ny halatra Fantatro izay nataon'ity mpividy ity FA TSY fantatro ny fomba hifandraisan'ity mpanjifa ity na tsia. Miverina handoa ahy, NA AZA ATAO AZA ATAO, AZO ATAO NY ID-AZY MBA HAHAZO TSARA NY VAROTRAO DIA MISAOTRA ANAO ARY TSARA MARAINA
Mamaly an'i Larry
Salama, namidy ahy iPhone 5 voasakana izy ireo ary tiako averina aminao izany ary tsy mahita fomba hifandraisana amin'ny polisy aho, tsy handray izany, te-hifandray amin'ny tompony aho
Io no zava-dehibe indrindra alohan'ny hividianana iPhone na zavatra hafa amin'ny Apple hahafantarana raha voasakana amin'ny iCloud izy ireo, napetrak'izy ireo tao aminao izany saingy tsara.
Te-hamerina iPhone aho, dia ny nivarotan'izy ireo tamiko fa nofitahin'izy ireo aho, izao dia te hifandray amin'ny tompona aho fa tsy haiko ny manao azy satria tsy miasa ny sela.
Nahita iPhone aho nefa toa vahiny izany ary diso ny bokotra herinaratra, ahoana no hanombohako azy satria tsy te hitondra azy any amin'ny polisy aho ary matoky an'i Keno ..
Naomy dia hoy izy:
Misaotra anao tamin'ny lahatsoranao momba ny fitadiavana iPhone sy iPad raha sendra misy halatra. Mpamaham-bolongana manokana amin'ity lohahevitra ity aho ary afaka manome toky anao aho fa ny rindrambaiko manokana tokana dia afaka misoroka tranga tsy ilaina. Hijery misimisy kokoa ao amin'ny bilaogiko:
Izay rehetra hitanao ato amin'ny tranonkalako dia fampahalalana mahaliana sy marina.
fangatahana: nangalatra ny iphone 5s nataoko nitady an'io nandritra ny 3 volana, androany aho dia mahazo hafatra avy amin'i icloud milaza fa nahita azy ireo izy ireo, saingy tsy hitako amin'ny sarintany, hoy ny Offline. Avy eo mahazo mailaka avy amin'i icloud aho ary milaza fa hita io ary ho hita mandritra ny 24 ora ny toerana misy azy nefa tsy hita eo amin'ny sarintany izany. Inona no azoko atao hahitako azy, misaotra!
daft654 dia hoy izy:
salama avy aiza ianao? Milaza aho fa na dia vao haingana aza ny probabilité (roa na telo andro) dia namidin'izy ireo iPhone 5 tamina namana iray izay voasakana ary toa nanandrana namerina izany izy ireo ary nilaza taminy ilay "mpivarotra": novonoiny io tokony ho telo volana lasa izay fa tsy ampiasaiko…. ary notehiriziko hatramin'ny roa na telo andro izay ihany, averiko fa tsy azo inoana izany fa angamba angamba
Valio i daft654
Avy amin'ny kaomina Maipú, Santiago, Chile aho. saingy toa niditra tao amin'ny icloud ahy izy ireo ary nanala ireo iphone 5s tao amin'ny fisoratana anarana, ankehitriny dia tsy afaka mahita aho izao amin'ny «Tadiavo ny iphone». Toa very izany.
Te-hahita ny tompona iPhone izay avy any Etazonia very aho ary tsy haiko ny fomba
tena nividy ratsy tokoa nefa tsy nahalala betsaka momba an'io
salama, nahita iphone aho omaly tany Madrid. Niezaka ny nitady ny tompona aho fa tsy afaka atao satria mila kaody ianao raha te-hiditra, ka tsy afaka niantso antso aho, ary tsy nisy antso tonga. Androany dia nateriko tany amin'ny Polisim-pirenena izany mba hahitako raha hitan'izy ireo ny tompony ary lazain'izy ireo amiko fa miaraka amin'ny nomeraon-telefaona IMEI an'io telefaona io dia toa tsy fanamelohana izany. Nalain'izy ireo ny telefaona ary dia izay. Ka inona izany chafón izay tsy tonga amin'ny tompony amin'ny farany. Nangataka fanamarinana fanaterana aho ka manana ny nomeraon'ny IMEI, ary fantatro fa voasoratra tamin'ny voasary aho. Misy fomba hitadiavana ny tompony ve?
Nahita iPhone 6 aho
Fa avy any amin'ny firenena hafa izy, ahoana no hamerenako azy io ary tsy manana olana na zavatra hifandraisana amin'ny tompony
Dayan dia hoy izy:
Salama, avy any Costa Rica aho, ny rafozam-baviko dia miasa ao amin'ny tobin'ny bus, tao amin'ny iray amin'ireo bisy ireo dia nahita iPhone 5 izy, notazoniny nandritra ny 3 volana izany, niandry raha nisy nangataka izany, fa tsia, Avy eo natolony ny vadiko sy izahay, izahay no namadika azy fa voasakana, ny imei ihany no hitako, manomboka eto ka hatrany amin'izay ahafahako mifampiresaka hangataka vaovao! MISAOTRA
Mamaly an'i Dayan
Salama, avy any Peroa aho, nangalarina ny iPhone 6, napetrako tao anaty maody very io, nametraka hafatra teo amin'ny efijery fanidiana anao aho, saingy nahazo hafatra tamin'ny findaiko izay napetrako hampiasana ahy ary nolazain'izy ireo tamiko izany: «Fanairana! Icloud iphone 6 amin'ny maody very na nangalatra dia hita, jereo ny toerana misy anao ao amin'ny Login.findmyiphonelost.com. Te hahafantatra aho raha marina ireo na tsia. Ankasitrahako ireo fanehoan-kevitra na raha sendra olona hafa izany
Nividy iPhone 5s aho ary rehefa naveriko tamin'ny laoniny dia niseho ny hafatry ny tompony niaraka tamin'io isa io, nantsoiko io isa io ary nolazain'izy ireo tamiko fa tsy very finday izy ireo, fa hanao scam amin'ny hafa izy ireo, ahoana no hifandraisako aminy amin'izay?
Angello Degree dia hoy izy:
Ity IMEI ity dia mila ny IMEI hanome anao "TOROHEVITRA TERMINAL" ary amin'ny farany manampy anao hitady ny tompony. Inona no tianao holazaina amin'ny fanohanana terminal? Hifandray amiko amin'ny tompona iphone ve izy ireo? Manantena aho fa hanazava ny fisalasalako azafady.
Valiny tamin'i Angello Grados
Manana iPhone 6 nosakanan'ny Icloud aho, avy any Sprint izy io nefa tsy manana chip na tsy mamela ahy hiditra na inona na inona, mangataka ny kaonty avy hatrany mba tsy hahitako ireo olona nifandraisanao na zavatra hafa, antsoy Sprint ary lazao azy ireo ny toe-javatra ary nolazaiko azy ireo tamin'ny isa IMEI afaka manampy ahy hahita ny tompony izy ireo ary ny valiny dia: TSIA.
Azafady, te hamerina iPhone 5s hitako tany Arzantina niaraka tamin'ny tsipika amerikana aho, saingy tsy hitako ny fomba anaovana azy raha misy manana endrika, azafady manorata amiko. Abertutti@gmail.comRaha misy mahay manao azy dia andefaso aty amiko ary azafady aza te-handany ny fotoanako izy ireo, mila averiko izany fa amin'ny tompony, misaotra ANGELO
Salama, nahita iPhone 6 nitsivalana teny amin'ny arabe aho, vaky ny écran rehetra, niditra ny antso nefa tsy afaka mamaly aho na mahita na inona na inona, ahoana no hahitako ilay mpampiasa icloud izay ifandraisany handefasana mailaka aminao ? Hitako fa ampandehanana ho an'ity imei ity ny hidy icloud
Azafady mba nahita finday 5s aho teny amin'ny lalamben'i San Rafael ao afovoan'i Havana Cuba miaraka amina tsipika amerikana avy any Verizon, raha misy very telefaonanao dia andefaso mailaka amiko abertutti@gmail.com Ary haveriko izany, fihina iray azafady, ny hany fomba hahalalana raha tompona io dia ny manatona ahy ary mametraka ny teny miafina mamoha eo imasoko na mandefa izany amiko ary omeko anao ary ianao no tompona, tsia tsy manelingelina ahy izy ireo hanadihady na hametraka fanontaniana tsy ara-dalàna
Navelan'izy ireo ny iPhone 5s izay adino ny telefaona finday ao amin'ny seranam-piara-manidina any Colombia ... misy hidin-trano hiditra iCloud ... izay tsy nanandrana namaritana aho satria tsy findaiko ... nesoriko ilay puce ary dia avy amina orinasa iray any Canada ... ary ao anaty maody fiaramanidina ... tiako hamerina izany ... satria tsy tiako hitranga amin'ny my ñ ... ampifandraisiko amin'ny iTunes izy io ary hivoaka izaho, María Camila ... fa tsy misy hafa ... inona no azo atao ????
Raha mahita iPhone 6 any Espana aho dia andramo avereno, any Kolombia aho, 4 na XNUMX volana lasa izay no nahitako azy, mety ho hitan'izy ireo eto ve izy ireo?
Nahita iray aho ary nanana hafatra valiny miverina sy nomeraon-hafatra hiantsoana azy. Mifandraisa amin'ny tompony dia namaly izy hoe tsia misaotra .. midika ve izany fa tazomiko? Ny fomba nahitako azy. ?
Raha misy valisoa ary tsy tianao ny mandoa izany, manan-jo hitaky izany ve aho?
yonny dia hoy izy:
Nahita iPhone 5 aho ary tsy haiko ny mifampiresaka amin'ny tompony (a) dia avy amin'ny firenena hafa noho ny sim izay ananako, misy olona afaka manampy ahy misaotra
Valio i yonny
Mila tompona iPhone 4 aho hamaha ary mividy tanana faharoa koa io
Izaho dia nangalatra ny iphone 6 fa efa iray volana izao izay tsy azoko ny toerany dia tsy haiko intsony izay hatao
josu3 dia hoy izy:
Nahita iPhone tamin'ny kameran'ny làlambe iray tany Jalisco aho fa narian'izy ireo satria nisy olona tany ivelan'ny tompony tsy afaka nampiasa azy io satria tsy nanana chip io ka orona orinasa na zavatra hafa x ny style tiako hamerenana azy fa ny vdd tsy haiko hoe ahoana no ahitako ny tompona toa ny ahitako azy satria tsy mila olana aho ary kely noho ny finday misaotra
Mamaly an'i josu3
Raha toa ny tompony nampiditra ny angon-drakitra ao amin'ny fangatahana ara-pahasalamana. Ny fanomezana SOS, ny angona momba ny fitsaboana dia hamela ny tompony sy izay hiantso azy. Raha manontany an'i SIRI ianao hoe iza no tompon'ny iPhone dia hahazo ny fifandraisan'ny tompony izany. Raha napetraky ny fifandraisanao amin'ny rakitrao.
Elizabeth jimenez dia hoy izy:
Very ny iPhone 6 plus tao amin'ny trano fandraisam-bahiny tany Madrid, antsoina hoe fisotroan-dronono Corbero izany, ary ny pitsopitsony dia hoe hadinoko teo ambony sezalava io raha nitady ny taratasim-panidiko aho, ary nandao ilay toerana aho nefa tsy naka izany, afaka 10 minitra Tsapako izany ary niverina tany amin'ilay toerana aho, mazava ho azy tamin'ny fotoana nialako teo amin'ilay toerana dia teo ihany no nikarakara azy fa rehefa niverina aho dia tsy naveriny intsony, androany naharay fampandrenesana aho fa manana izy ireo nahita an'io fa tsy manome ahy fidirana hahitako hoe aiza ary iza no manana azy.
Nisy nanjo olona ve izany ary efa nanam-bintana ve ny famerenany izany? Tsara ny manamarika fa mihidy amin'ny dian-tongotra izy io ary mihidy isa koa.
Valiny tamin'i Elizabeth Jimenez
jwesleymch dia hoy izy:
Nahita finday 6+ tamina seranam-piaramanidina aho, raha nidina ny fiaramanidina aho dia nitazona ny telefaona raha sendra nisy nahita izany teny an-tanako ary nangataka ahy hamerina azy. Amin'ny alàlan'ny famantarana ny mpiasa an'habakabaka dia tsy maintsy namono azy io aho raha nandeha. Rehefa tonga tany amin'ny toerana nalehako aho dia natodiko izy io ary teo amin'ny efijery dia nahita antso tsy nantsoiko tamina nomerao iray aho, te hamerina ilay antso amin'ny alàlan'ilay iPhone iray ihany, saingy nangataka ahy ilay kaody famaha, izay tsy fantatro. Rehefa nangataka ny laharana mamoha aho dia nijanona tsy nahita ny laharana tokony hiverenan'ny antso intsony, tonga tamiko ny famonoana azy sy ny famerenako azy saingy niaraka tamin'ny telefaonako teo am-pelatanako ka rehefa mipoitra indray ilay fampandrenesana antso an-tariby dia raiso ny isa ary miantso avy amiko. Ny famerenana indray ny solosaina dia nanomboka namafa ny zava-drehetra ary toy ny orinasa izy io.
Nentiko tany amin'ny mpanome serivisy an-tariby an'ilay "voakasik'izany" izany, nangatahiko izy ireo mba hizaha izany amin'ny imei ao amin'ny tobim-baovaon'izy ireo ary homen'izy ireo azy ny nomeko, ilay olona namaly ahy dia namaly fa tsy voasoratra ny telefaona (IMEI) amidin'izy ireo ary noho izany tsy manana fomba hitadiavana ny tompony izy ireo. Natolotro ny folio SIM rehefa naseho ahy dia milaza amiko fa satria nano sim izy io, dia tapaka ireo tarehimarika nahafantarana azy ny tsipika misy azy. Nanontany an-dravehivavy aho hoe inona no hatao raha te-hamerina azy aho, tsy mila izany. ary milaza amiko TSY MISY.
Manantena aho fa ho hitan'ny tompony amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny toerana io, na dia efa nofoanako aza ny tsipika an'ity SIM ity, saingy manantena aho fa amin'ny IMEI no ahitako azy dia mbola manana SIM ao anatiny aho ary avadika mandrakizay amin'ny Wi-Fi tambajotra, miandry ny hahatratrarana azy.
Mamaly an'i jwesleymch
Brian ghoul dia hoy izy:
Salama, tiako ho fantatra amin'ny tompona iPhone 5 izay tonga nanolotra ahy io ho gadrako ary adala aho nomeko ny volan'ny pion ary ilay nahatonga ahy nilalao dia tsy bolbio tamin'ny vola Nomeko azy ho an'ny kitapo izy ary tiako hifandray amin'ny tompona tiako ny fanampiany
Valiny tamin'i Brian Ghoul
Angel Enrique Paredes Grandez dia hoy izy:
Salama, avy any Peroa aho, nividy tànana faharoa tamin'ny iPhone 6s aho ary nosakanana tamin'ny id sy teny miafina ary efa nifandray tamin'ny tompon-trano aho nanazava ny zava-nitranga ary nilaza tamiko i Fella fa nangalarin'izy ireo izany saingy tsy omeko tsiny ny fividianana izay tadiaviko. quirks manampy tsy ampiasaina intsony ary avy any brazil izy
Valiny tamin'i Angel Enrique Paredes Grandez
fanontaniana iray ... inona no hataonao amin'ny raharahako? Jereo fa nivarotra iPhone 5 ho ahy ny taloha, avy eo nangataka teny miafina tamiko fotsiny izy ary nomeny azy hanafoana ary nijanona tsy nivoaka ny hafatra ary afaka niditra tamin'ny asany aho, satria tao an-tsaiko ny manavao azy io ary tsara ny nataoko tamin'izany hadisoana izany ary anio dia manontany ahy ny id sy ny tenimiafiko izy, inona no hataonao raha manana ny mailaky ny tompona iphone ianao, hifandray aminy ve ianao mba hanala azy amin'ny lisitry ny fitaovana ao amin'ny kaonty icloud?
Nohavaoziko tamin'ny iOS 10 satria nanana 8.3 izy ary satria nihetsika mba hahitana ny iphone-ko dia mangataka amiko ilay mpampiasa izy ary mandalo, rehefa nomeny ahy raha afaka miditra amin'ny interface ny iphone amin'ny ankapobeny izy io fa rehefa manavao azy manontany ahy izany fa, fantatro ny mailaky ny tompony ary any USA izy ary any amin'ny sakaizako no andefasako azy io ary matahotra ny olon-tiako taloha sao hiteny eto ilay rangahy ary hanontany ny ray aman-dreny raha nivarotra azy ireo izy ireo hanontany azy x izy, izany no tsy hitako izay hataoko raha andefasako azy ny mail izay efa ananako vao halefa sa inona?
Ny zava-mitranga dia tsy te hanampy ahy amin'izany izy noho ny henatra, satria efa herintaona izay no nandefasany azy tany aminy
Jhoinert dia hoy izy:
Te hahafantatra aho hoe iza no tompona iPhone 6 ary averiko aminy, inona no tokony hataoko? Misaotra anao manana kaonty icloud mihidy
Mamaly an'i Jhoinert
Nahita iPhone 6s plus tiako ho fantatra ny fomba hahitana ny tompony, ireo no angon-drakitra raha sendra izay miditra eto dia avy amin'ny Apple ID sy teny miafina izay nampiasaina hanamboarana ity iPhone ity. (4 radio-radio-video)
manuel maza dia hoy izy:
Manana iPhone 6 aho fa miaraka amin'ny icloud
Valiny tamin'i Manuel Maza
Salama nomeny ahy ny iPhone 4 fa mangataka amiko ny karapanondro sy ny teny miafiny tiako ho fantatra amin'ny tompony izy fa amin'ny Apple dia tsy manome ahy fanazavana mahasoa izy ireo .. Raha misy efa mahalala ny fomba hanaovana an'io dia manorata ahy azafady mankany amin'ny mailaka nico.113@hotmail.com
Nahita iPhone 6s aho ary te-hahita ny tompony, ahoana no hataoko?
yarvysL dia hoy izy:
Toy izany koa no nanjo anao, nivarotra iPhone 5 ho ahy izy ireo tamin'ny 150 ary maty io ka rehefa tonga tany an-tranoko dia natodiko ary nanana kaody fidirana aho tamin'ny fotoana hitako fa nosakanany satria nitady azy ireo izy ireo ary izao tsy haiko hoe orinasa inona io sa ilay anarana fantatro ihany fa manomboka amin'ny f ny anarany.
Valio i yarvysL
skalopendra dia hoy izy:
hahaha, tapaka aho ary miera… fitaovana tsy misy ilana azy mihintsy miaraka amin'ny icloud…, hahaha, miraikitra ..., mitentina 20 dolara ao anaty aliexprees ny takelaka, ovao 12 minitra, efa manana finday vaovao ianao…., aza adalana olona, ​​avy eo dia mino izy ireo fa amin'ny famoronana kaonty hazo paoma sy famenoana bebe kokoa ny paosiny, dia hanana ny finday mandrakizay izy ireo hieritreritra fa haverin'izy ireo any amin'izy ireo satria nosakanany ..., hahahaha, na izany aza ...
ary mividy finday ho an'ny vola an'arivony hafahafa hanoratra amin'ny wat ary miantso…, tsy miresaka momba izany akory aho…, avy eo very na mangalatra…, satria mila misafidy hangalatra sela aho telefaona manomboka amin'ny 100 ka hatramin'ny iray amin'ny 1000 dia mazava ny halehako fa tsia ..., hoy indray aho amin'ny farany ..., ary ho an'ireo izay nahazo iray voasakana ..., aza esorina ny lohalaharana amin'ireto lahatsoratra ireto sy ny iray hafa, mividiana takelaka, manokatra horonantsary youtube tsara hanarahana ny dingana ary hanova izany ..., efa nolazaiko fa 20 dolara
Mamaly an'i eskalopendra
Donovan dia hoy izy:
Nahita iPhone 8 aho ary hatramin'izao dia mbola tsy nanisy marika an'io tamin'ny anaran'i Ximena Vilchis izy ireo raha misy mahalala azy na mahalala momba ny fiantsoany 5586908130 hamerina izany
Valiny tamin'i Donovan
357275093012331 ity IMEI ity, azafady mba mifandraisa amiko
Ny sela dia XS max.
namany Sary scarletther20@gmail.com
Juan Luis Prado negrete dia hoy izy:
Very iPhone 7 aho ary nitady ny iPhone nomeko toerana nalehako tany amin'izay nisy azy ary hita fa fonenana izy io ary tsy navelan'ny mpiambina hiditra hamotopototra bebe kokoa momba ilay raharaha aho, nilaza fotsiny izy fa tatitra no handeha, ho malina ny mampandre ny polisy ary mangataka fanampiana amin'izy ireo hahitako ny findaiko?
Mamaly an'i Juan Luis prado negrete
Famerenana horonan-tsary sy fandefasana ny fampiharana MoneyWiz [NAORENANA]